KEDU IHE DỊ MMA MAKA LAPTỌỌPỤ HDD MA Ọ BỤ SSD - SSD - 2019
SSD ma ọ bụ HDD: ịhọrọ ọkpụkpọ kacha mma maka laptọọpụ
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike ịchọta ozi dị otú ahụ site na usoro - "Njehie, efu msvcp120.dll". Tupu ị malite nkọwa zuru ezu nke ụzọ maka idozi ya, ịkwesịrị ịkọtụ ntakịrị banyere mgbe njehie ahụ gosipụtara onwe ya na ụdị ụdị faịlụ anyị na-arụ. A na-eji ụlọ akwụkwọ DLL rụọ ọrụ dị iche iche. Njehie merenụ ma ọ bụrụ na os enweghị ike ịchọta faịlụ ahụ ma ọ bụ gbanwere ya, ọ ga-eme na usoro ihe omume ahụ chọrọ otu nhọrọ, ọzọ ejirila oge a. Nke a dị nnọọ obere, mana ewepụghị ya.
A na-etinyefe faịlụ ndị ọzọ na ngwugwu na usoro ihe omume ahụ, mana iji belata nhazi nke nkwụnye ahụ, na ụfọdụ, a na-ewepụ ha. Ya mere, ị ga-etinye ya n'onwe gị. O nwekwara ike ikwe ka DLL faịlụ gbanwere ma ọ bụ bufee ya na antivirus ka ọ na-ekpuchi ya.
Usoro mgbake usoro
E nwere ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi wepu njehie si msvcp120.dll. Ọbá akwụkwọ a ga-abịa na nkesa Microsoft Visual C ++ 2013 na-ekesaghị Redistributable, na n'ọnọdụ a, nrụnye ya ga-adị mma. O nwekwara ike iji usoro ihe omume nke na-arụ ọrụ a n'onwe ya, ma ọ bụ ị nwere ike ịchọta faịlụ ahụ na saịtị ndị na-enye ha maka nbudata.
Usoro 1: DLL-Files.com ahịa
Ihe omume ahụ nwere ike ịchọta DLL site na iji ebe nrụọrụ weebụ ya, ma detuo ha n'ime usoro.
Download DLL-Files.com Onye ahịa
Iji jiri ya na msvcp120.dll, ị ga - achọ ihe ndị a:
Na nbanye ịbanye msvcp120.dll.
Pịa "Mee nyocha."
Pịa na aha akwukwo.
Usoro ihe omume ahụ nwere ihe ọzọ maka ikpe mgbe ịkwesịrị ịwụnye otu ụdị ọbá akwụkwọ. Nke a dị mkpa ma ọ bụrụ na etinyere faịlụ ahụ na ndekọ ziri ezi, egwuregwu ahụ anaghị achọ ịrụ ọrụ ọzọ. Iji jiri ya, ị ga - achọ:
Kwado ọnọdụ pụrụ iche.
Họrọ ihe achọrọ msvcp120.dll wee pịa "Họrọ nsụgharị".
Ntọala ga-apụta mgbe ọ dị mkpa:
Dee adreesị nwụnye nke msvcp120.dll.
Pịa "Wụnye Ugbu a".
Usoro 2: Anya C ++ 2013
Microsoft Visual C ++ 2013 na-akwalite ụlọ akwụkwọ dị iche iche na ụdị dị iche iche dị mkpa maka iji ngwa ejiri Visual Studio. Iji dozie njehie ahụ na msvcp120.dll, ọ ga-adị mma iji wụnye nkesa a. Ihe omume ahụ ga-etinye ihe ndị ahụ n'ọnọdụ ha ma denye aha ha. Ị gaghị achọ ihe ọ bụla ọzọ.
Download Microsoft Visual C ++ 2013 ngwugwu
Na ibe ebudata ị chọrọ:
Họrọ asụsụ nke Windows gị.
E nwere ụdị nchịkọta abụọ - maka kọmputa nwere nhazi 32-bit yana 64 bit. Ọ bụrụ na ị maghị onye ịchọrọ, chọta ngwaahịa nke usoro ahụ site na ịpị "Kọmputa" pịa nri na desktọọpụ gị ma ọ bụ na OS amalite menu, na imeghe "Njirimara". Ị ga-ahụ ozi ebe ị nwere ike ịchọta bit.
Họrọ x86 maka Windows 32-bit ma ọ bụ x64 maka 64-bit, karị.
Gbaa nhazi nke ngwugwu ebudatara.
Nabata usoro ikike.
Jiri bọtịnụ "Wụnye".
Mgbe usoro ahụ gasịrị, msvcp120.dll ga-adị na ndekọ usoro, nsogbu ahụ ga-apụ n'anya.
N'ebe a, a ghaghị ikwu na oge Microsoft C C + nwere ike igbochi nrụnye nke ochie ahụ. Ị ga-ewepụ ya na iji "Ogwe njikwa", wee wụnye nhọrọ 2013.
Anya Microsoft C ++ ọhụrụ anaghị emechi ndị gara aga, ya mere ọ dị mkpa iji nsụgharị mbụ.
Usoro 3: Download msvcp120.dll
Iji wụnye msvcp120.dll onwe gị na n'enweghị ihe mgbakwunye ndị ọzọ, ị ga-achọ ibudata ya ma bulie ya na nchekwa na:
naanị na-edeghachi ya n'ebe ahụ na ụzọ mbụ iji debe faịlụ ma ọ bụ dị ka egosiri na nseta ihuenyo:
Ụzọ ịmepụta akwụkwọ ọgụgụ nwere ike ịdị iche, maka Windows XP, Windows 7, Windows 8, ma ọ bụ Windows 10, ịnwere ike ịchọpụta ebe na ebee ga-etinye faịlụ na isiokwu a. Iji debanye aha DLL, gụọ isiokwu ọzọ anyị. A chọrọ usoro a n'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ naghị adị mkpa iji mezuo ya.